3 dhimasho ah & 10-neeyo dhaawac ah oo uu sababay iska-horimaad hubaysan oo ka dhacay Galkacyo. – Radio Daljir
Diseembar 23, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Dec 23 – Iska-horimaad hubaysan oo u dhaxeeya laba ciidan oo kala taabacsan dawladda hoose ee Puntland iyo kuwa GalMudug ayaa maanta ka dhacay aggagaarka suuqa weyn magaalada Galkacyo.
Iska-horimaadkaan oo gaystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa bilawday kadib markii toogosho lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda hoose ee maamulka Puntland ee magaalada Galkacyo, kaasi oo xilliga la toogtay ku guda jiray hawlihii shaqo ee caadiga ahaa ee maamulka degmada.
Inta la ogyahay 3 qof ayaa ku geeriyootay iska-horimaad xilligaasi bilowday, waxaana ku dhaawacmay in badan 10, sida idaacadda Daljir ay ka xaqiijisay goobaha caafimaadka ee ku yaalla magaalada Galkacyo; waxaana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay iskugu jiraan dhinacyadii dirirtu dhexmartay iyo dad shacab ah oo ay rasaas habaw ahi haleeshay.
Dadkii gaystay dilka askariga dhintay ee ay ka kacday rabshaddu ayaa isla markiiba u baxsaday dhanka xaafadda Wadajir ee koonfurta magaalada Galkacyo oo uu ka arrimiyo maamulka Galmudug, waxaana xilligaas kadib bilawday bandow lagu soo rogay suuqa askariga lagu toogtay, bandowgaasi oo ay sameeyeen ciidanka amniga ee maamulka Puntland si loo baadi goobo ciddii falkaasi ka danbaysay.
Ciidamada amniga ayaa isla markiiba gudaha u galay halkii ay u baxsadeen raggii gaystay dilka askariga, waxayna la kulmeen rasaas ay ridayeen ciidamada maamulka Galmudug iyo dad ka barbar dagaallamayey sida ay noo xaqiijireen saraakiisha amnigu, taasi oo sababtay in uu si rasmi ah u bilawdo iska-horimaadku.
Is-rasaasayntaan oo socotay muddo saacado ah maanta galinkii dambe ayaan si rasmi ah loo ogaan karin tirada dhimasho iyo midda dhaawac ee soo kala gaartay garabyadii dagaalku dhexmaray, hase ahaatee illaa hadda waxaa la xaqiijiyey dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca in ka badan 10 qof oo kale.
Xiisaddaan colaadeed ayaan illaa iyo haatan aysan jirin cid u guntatay sidii loo damin lahaa, waxaana laga walaacsan yahay sida ay xaaladdu noqon doonto haddii iska-horimaadkaani sii xoogaysto.
29-kii bishii October oo sanadkaan ayey ahayd markii iska-horimaad kan la mid ahi uu dhexmaray ciidamada amniga ee maamulka Puntland iyo kuwa Galmudug, kaasi oo gaystay khasaro dhimasho iyo dhaawac oo ka badan midka maanta dhacay, waxaana iska-horimaadkaasina uu ahaa mid ka kacay kadib markii la weeraray ciidamada maamulka dawladda hoose ee Puntland.
Dhawr shir oo la doonayey in xal looga gaaro khasaarihii ka dhashay dagaalkii 29-kii October laguna qabtay magaalada Galkacyo ayaa fashilmay, waxaana guddiyadii shirkaasi ay iskaga kaceen fadhiga kadib markii ay isku afgaran waayeen waddada loo marayo xallinta arrintaas.
Dagaal dad badani ku dhintay oo maanta ka dhacay Galkacyo & xaaladda oo hadda deggan.
?Xildhibaan Xirsi Bulxan oo sheegay in amniga mudanayaasha baarlamaanka federaalku uu halis ku jiro.